Sheekada filimka Genius: Utkarsh Sharma filim wanaagsan kuma dhicin safarkiisa kowaad Bollywood-ka – Filimside.net
Sheekada filimka Genius: Utkarsh Sharma filim wanaagsan kuma dhicin safarkiisa kowaad Bollywood-ka
August 27, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: August 27, 2018
Director Anil Sharma waa filim sameeye siweyn looga qadariyo Bollywood-ka sidoo kalena sameeyay filimkii Classic ahaa ee All Time Blockbuster-ka noqday Gadar Ek Prem Katha haatana wuxuu qaatay masuuliyada ah inuu wiilkiisa Ukarsh Sharma Bollywood-ka kusoo biiriyo.
Jilaayaasha filimka Genius: Utkarsh Sharma, Ishita Chauhan, Abhimanyu Shekhar Singh, Nawazuddin Siddiqui, Mithun Chakraborty, Ayesha Jhulka
Qiimeynta filimkan sheekadiisa: 1/5 (Hal xidig!)
Muxuu Ku Wanaagsan Genius: Action-kiisa ayaa yara iyo heesihiisa oo siweyn dadka usoo jiidanayaan
Muxuu Ku Liitaa Filimka Genius: Maba jirto meel laga qaadan karo fariin ahaan madaama sheekadiisa aad u liidato sidoo kalena waqti badan la galiyay laakiin nuxur dhan uusan laheyn.
Fariinta Filimka Genius Oo Kooban: Vasudev Shastri (Utkarsh Sharma) waa wiil agoon ah kana yimid tuulada Mathura waxayna maskaxda u shaqeysaa si ka xawaare sareyso kumbuyuutarka iyo aalada casriga ah sidoo kalena cilimiga seyniska iyo cilmiyada kale aad ayuu ugu xeel dheer yahay waxbarash ahaan.
Vasudev Shastri (Utkarsh Sharma) wuxuu wax ka bartaa IIT Roorkee wuxuuna jeclaanahaa gabbar kuleejka la dhigato ee lagu magacaabo Nandini (Ishita Chauhan).
Waaxda sirdoonka Hindiya ayaa ogaanayaan cabqarinimada Vasudev Shastri (Utkarsh Sharma) waxayna ku casuumayaan inuu sirdoonka qaranka soo galo maskaxdiisana ugu faa’iideeyo balse wuu ka diidayaa.
Maalin maalmaha ka mid ah Vasudev Shastri (Utkarsh Sharma) wuxuu bad baadinaa waaxda sirdoonka Hindiya oo la kulmayaan shil ah in xogtooda Internet-ka lagu dhacay dib ayuuna ugu soo celinaa.
Kadib Vasudev Shastri (Utkarsh Sharma) wuxuu aqbalaa inuu sirdoonka Hindiya la shaqeeyo kadibna waxaa loo xil saaraa kiiska xogta sirdoonka lagu dhacay qofka ka dambeeyay inuu soo ogaado.
Wiilkan yar wuxuu dhexda ka galaa duni isaga ka tan weyn madaama wax walbo ku biyo shubanayaan tuuga weyn ee caqligiisa aadka u sareeyo hawl gal kastana u guuleesto MRS (Nawazuddin Siddiqui) balse cidna aysan heesbtiisa garan karin.
Filimka Genius qeybihiisa dambe waxaa loo daawan doonaa sida Vasudev Shastri (Utkarsh Sharma) ula dagaalamayo xeelad ahaan iyo xoog ahaan tuuga awooda badan maskaxdiisana aadka u sareyso MRS (Nawazuddin Siddiqui).
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Genius: Director Anil Sharma xushmad weyn ayuu mudan yahay balse markaan fariintiisa ugu liidato ebid ayuu la yimid madaama Genius la iska sameeyay uusan laheyn nuxur loo daawado iyo isku xir heer sare ah.
Sidoo kalena sheekada filimka Genius ma ahan mid maangal ah sidoo kalena mada daalo leh waana fariin lagu caajisayo sidoo kalena isku xir wacan loo sameynin.
Dhibka ugu weyn ee jiro ayaa ah in 10-daqiiqo marka uu socdo filimkan qof walbo oo daawanayo fahmi karo wax walbo ee xiga dhici karo taasina xiisaha ayay filimka ka qaaday madaama fariintiisa loo dhigin hab maskaxda daawadaha mashquulin karto.
Bandhiga Jilaayaasha: Utkarsh Sharma waa dadaalay balse doorka loo dhiibay iyo isaga muuqaal ahaan iskuma qalmaan waxaana loo dhiibay filim isaga ka weyn sidaa darteed wiilkan qaab jiliinkiisa ma xumo laakiin Genius waa fariin isku dhex yaacsan isagana muuqaal ahaan kusoo baxeynin.
Ishita Chauhan bandhigeeda waa mid liidato wax badan ayaa u harsan gabadhan fanka ku cusub qaabka wax loo jilo siweyn uma diyaarsano madaama hal muuqaal kusoo cel celineyso gaar ahaan habka wax loo matalo sidoo kalena door adag lama siinin.
Nawazuddin Siddiqui wuxuu soo baxaa muuqaal ahaan filimkan marka kala bar loo dhaw yahay kadib waa jilaaga kaliya ee filimkan kugu qasbaayo inaad daawatid bandhiga uu sameenayo iyo hadalada uu adeegsanayo waa ruug cadaa filim liito xitaa libintiisa ka muuqan karto.
Ruug cadaa Mithun Chakraborty doorkiisa sarkaalka sirdoonka waa mid wacan balse filimka ayaa sheeko ahaan liito sidaa darteed dadaalkiisa meel cidlo ah ayuu ku baxay.
Gunaanad: Genius waa fariin la iska sameeyay oo aan nuxur laheyn sidaa darteed Ukarsh Sharma fursad labaad inuu helo ayaan u rajeneynaa kaliya u daawo filimkan heesihiisa aadka u macaan ee meel cidlo ah lagu shubay waxaana ka mid ah heesihiisa hirgaleen ee aan laga xiiso dhigeyn Tera Fitoor’, ‘Dil Meri Na Sune’, ‘Tujhse Kahan Juda Hoon Main’, ‘Holi Biraj Ma’ iyo ‘Pyar Le Pyar De’.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Genius:
Waxaa Aqrisay 1,091